Home Somali News Somalia:Hawlgalkii Hotel Maka al-Mukaramah oo la soo afjarey
Waxaa subaxnimadii maanta oo Sabti ah la soo afjarey hawgalkii ciidamada amaanku ay bilaabeen shalay (Jimce)gelinkii danbe, kadib markii koox hubeysan oo ka tirsan al-Shabaab ay gudaha u galeen Hotel Maka al-Mukaramah oo ku yaala waddada Madaxtoyada tagta ee degmada Hodan gobolka Banaadir.´
Kooxda hubeysan oo ka tirsan al-Shabaab ee weerarka soo qaadey ayaa la sheegey in ay ahaayeen 6 nin sida ay sheegeen dadkii ka soo badbaadey weerarka, waxay wateen gaari nooca dagaalka ah oo aanu ku xirneyn qoriga Baroonka ama Dhashiikaha loo yaqaan, waxay xirnaayeen dharka ciidamada Dowladda, waxaana ay Hotelka ka soo galeen dhabarka danbe ee uu marto jid-cadde, gaariga ay wateen ayey albaabka hortiisa ku qarxiyeen waxaana albaabka markiiba ka galey 6-da nin ee weerarka fuliyey.
Wararku waxay sheegayaan in qofkii u danbeeyey la diley subaxnimadii maanta. Qaar kamid ah warbaahinada iyo baraha taageera al-Shabaab ayaa sheegay in ay waraysiyo ka qaadeen kooxda weerarka qaadey oo ku faraxsan dilka ay geysanayaan. Waraysida caynkan oo kale ah ayaa loo isticmaalaa qiiregelinta iyo marinhabaabinta da’yarta.
Ciidamada Booliska ee Miinooyinka baara ayaa ugu danbeynyii xaqiijiyey in Hotelka laga sifeeyey kooxdii weerartey. Waxaana loo oggolaadey qaar kamid ah warbaahintu in ay gudaha u geli karaan Hotelka.
Dowladdu weli si rasmi ah ugma hadlin khasaaraha ka dhashey weerarka.
Inta la ogyahay dad ka badan 10 qof ayaa kooxda hubeysan ku dileen Hotelka. Waxaa kamid ah dadka la diley ee magacooda la shaaciyey Denjiraha Soomaaliya u fadhiyey Geneva xarunta xuquuqda aadanaha ee Qaramada Midoobey Yusuf Maxamed Ismaaciil Baribari, iyo Farxiya Nuur oo muddo 30 sano ah ku nooleyd dalka Maraykanka haddana u shaqeyneysey Wasaaradda Maaliyadda, waxa la sheegayaa in Farxiya ahayd khabiir dhanka xisaabaadka ah ay la dhimatey Hooyadeed.
Ma jirin Xildhibaano, Wasiiro iyos araakiil kale oo magac leh oo Hotelka lagu diley. War Horseed soo gaarey ayaa sheegaya in kooxda al-Shabaab ka tirsan ay ku socdeen bartilmaameed, waxaana Hotelka ku qabsoomi lahaa shir ku saabsan New Deal, waxaana warku sheegayaa in laga badbaadiyey dadkii ay doonayeen in ay Hotelka ku qabsadaan, lamase sheegin magacyadooda.
Khasaaraha kale ee ka dhashey ha weerarka ayaa ah in burbur xoogleh soo gaarey Hotel Maka al-Mukaramah oo muddo ka badan 14 saac ahaa goob dagaal iyo qaraxyo ka socdaa, sidoo kale waxaa burburku soo gaarey guryaha ku dhaw Hotelka.
Warbaahinta ururka al-Shabaab ayaa sheegtey in ay Hotelka Maka al-Mukaramah u beegsadeen in uu yahay gob ay ku degaan saraakiisha nabadsugidda iyo qurbo-joog, waxaana ay ku doodeen in ay ka shaqeeyaan naago Kiinyaati ah oo madax qaawan! sida raadiyahoodu sheegay.
Hotel Maka al-Mukaramah waa markii afaraad ee la weeraro tan iyo sanadkii 2013.
Waxaa muuqata in al-Shabaab weerarada ay ka fuliyaan Muqdisho maalinta Jimcaha ah u leexiyeen goobaha Hoteelada ee ganacsigu ka socdo. Weerarkii kan ka horeeyey ee dhacay isla maalin Jicme ah ayey la beegsadeen Hotel Central iyada oo salaaddii Jimce markaas la tukadey. Dowladda federaalka oo guddi u saartey weerarkaas ayaan weli si rasmi ah u soo bandhigin natiijadii baaritaanka.
Waxaa weli xirin 8 sarkaal oo ka tirsan ciidanka Dowladda kuwaas oo loo haysto i ay wax ka ogaayeen weerarkii Hotel SYL, ka hor booqashadii Madaxweynaha Turkiga Tayyip Erdogan ku imaan lahaa, waxaa saraakiishan loo haystaa in ay si hoose ula shaqeyn jireen al-Shabaab, Wax maxkamad ah lama soo taagin weli.
Dowladda federaalku waxay ku doodeysaa in al-Shabaab ay yihiin naflacaari beegsanaya shacabka rayidka ah sida uu sheegey Madaxweyne Xasan Shiikh weerarka kadib isaga oo jooga Qaahira, inkasta oo naf-la-caarinimadda al-Shabaabku ay Alamtara soo dhaaftey, dadka Muqdishona ay sii nacayaanba maalinta Jimcada ah ee maalmaha ugu kheyrka badneyd, marka la eego weerarada al-Shabaab ee bilkasta isadaba jooga ah, markastana ay fulinayaan iyaga oo isu soo ekeysiiyey ciidanka Dowladda.